Fitaovana fanandramana Mingwang - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Ny orinasantsika dia manana karazana fitaovana fanandramana matihanina
Ny melt Flow Index dia refesina isaky ny grama ny polimerika mikoriana manerana ny tany. Ny fampiasana azy dia matetika ao amin'ny indostrian'ny plastika. Indice flow flow dia voatanisa matetika amin'ny takelaka data of thermoplastic materials. melt flow indexer no fitaovana malaza indrindra amin'ny indostrian'ny plastika hamaritana ny viscosities material ary matetika ampiasaina hizahana ny tsy fitovizan'ny batch-to-batch.
Ny karbaona mainty (grafita) dia iray amin'ireo additives plastika malaza tsy vitan'ny hoe loharanom-pigment mainty fa mora ihany koa fa manome toetra mekanika tena tsara sy fanoherana ny famoahana oxydation. Noho izany, ilaina ny fanombanana ny haavon'ny atiny mainty karbaona mba hitazomana ny fifehezana ireo fananana plastika.
ASTM D1603 sy ISO 6964 dia manolotra fomba mahazatra hanombanana ny votoatin'ny karbaona mainty amin'ny fitaovana olefin sy PE fantsona.
Ny marimarina kokoa, ny fomba fitsapana dia mamaritra ny famaritana ny atiny mainty karbaona amin'ny plastilena, polypropylene, ary plastika polybutylene. Ny fitaovana ampiasaina dia lafaoro fantsona misy sambo fandoroana napetraka ao anatiny.
Tamin'ny voalohany dia nafanaina tamin'ny 550 ilay fitaovana °C handoro ny polymer ny habetsahany noraketiny mialoha sy aorian'ity fizotrany ity. Ary farany, ny sisa dia mafana amin'ny 900 °C mandra-paha may ny fitaovana mainty karbaona rehetra dia ampangatsiahina sy lanja izany.
Ny Dripper Flow Tester dia afaka mizaha karazana fitaovam-pandefasana entona avy amin'ny fantson-drano mitete sy kasety mitete mankany amin'ny driper bokotra an-tserasera, mpamafazana ary na tsiranoka mitete aza tsy misy fantsona.
Ny fampiasana sela enta-mavesatra handrefesana ny rano voahangona dia manome mari-pahaizana ambony indrindra amin'ny fandrefesana amin'ny fotoana fohy indrindra. Vitantsika izany amin'ny alàlan'ny famelana santionany hatramin'ny 10 mba hosedraina miaraka amin'ny tsindry iray ihany.
Ny Flow Tester dia mifanaraka amin'ny ISO 9260 ary ISO 9261. Dimetera fitsapana mahazatra avy amin'ny 12-25 sy ny hafa azo alaina avy amin'ny fangatahana. Ny andrana dia azo alamina tanteraka ka hatramin'ny 30 ny fotoana fanerena samihafa. Ny fitsapana tsirairay dia mamoaka tatitra ahitana ny sary sy ny fanadihadiana statistika toa ny exponent sy CV.
Fitsapana ny lanjan'ny CV & CU
Fitsapana fanoherana ny toetrandro
Mialà amin'ny fanoherana